Wararka - Coca-Cola waxay bedeshay koobabka dib loo rogay, Unilever ayaa laba jibaartay caagagga dib loo warshadeeyay
Coca-Cola waxay badaleysaa koobabka dib loo warshadeeyay, Unilever waxay labalaabaysaa caagagga dib loo warshadeeyay
Calaamadaha macaamiisha adduunka sida Pepsi, Coca-Cola, iyo Unilever waxay sameeyeen ballanqaadyo baaxad weyn oo waaraya. Aynu eegno, waa maxay horumarkii ugu dambeeyay ee baakadaha ee noocyadan?
Pepsi-Cola Europe: Ku beddel dhammaan dhalooyinka caagga ah ee dib loo rogay sannadka 2022
Pepsi-Cola Europe, oo soo saarta Pepsi-Cola MAX, 7Up Free, Tropicana iyo cabitaanno kale, ayaa dhowaan shaacisay inay ku beddeleyso dhammaan badeecaddeeda 100% baakado caag ah oo dib loo rogay dhammaadka sannadka 2022.
Pepsi-Cola Europe waxay ku badali doontaa dhamaan wax soo saarkooda 100% baakadaha balaastigga ah ee dib loo warshadeeyay dhamaadka 2022.
Tallaabadani waxay ka jawaabaysaa ballanqaadkii shirkadda ee ku saabsan dhaqaalaha wareegsan ee balaastigga ah, iyadoo Pepsi Cola uu ballanqaaday inuu yareynayo raadkiisa kaarboonka cabitaanka 40%.
Tan ka hor, Pepsi-Cola waxay ku bedeshay cabitaanka smoothie-ka qaawan iyo baakadaha Tropicana Lean 100 baako caag ah oo dib loo warshadeeyay.
Pepsi-Cola Europe ayaa sidoo kale calaamadeeyay macluumaad dib loo cusbooneysiin karo oo ku saabsan dhalada, iyadoo xasuusisay macaamiisha inay dib u warshadeeyaan dhalooyinka caagga ah ka dib isticmaalka. Isla mar ahaantaana, macluumaadka dib loo cusbooneysiin karo ee baakadeysan ayaa sidoo kale lagu faafiyey dadweynaha iyada oo loo marayo marinnada warbaahinta sida TV-ga iyo dhacdooyinka dhacdooyinka.
Coca-Cola Australia: Yaree isticmaalka 40,000 tan oo caag cusub ah
Shirkadda Australian Coca-Cola ayaa ku dhawaaqday in dhammaadka 2021, ay yareyneyso isticmaalka 40,000 tan oo caag ah oo bikro ah (marka loo eego 2017). Himiladaan waxaa lagu gaari doonaa iyada oo lagu beddelayo koobabka cabitaanka ee barafoobay iyo daboolkeeda caag dib loo warshadeeyay.
Russell Mahoney, Agaasimaha Arimaha Bulshada, Isgaarsiinta iyo Joogtaynta Coca-Cola South Pacific, ayaa sheegay sanadkii la soo dhaafay in wax ka bedel lagu sameeyay baakadaha Australia, oo ay ka mid tahay in lagu beddelo dhamaan dhalooyinka balaastigga ah oo ka yar 1 litir dhalooyin caag ah oo dib loo rogay, iyo ka qaadida cawsyada caagga ah iyo Agitator.
Waxaan mas'uuliyad ka saareynaa yareynta raadkeenna deegaanka iyadoo loo marayo hal-abuurnimo oo aan gacan ka geysaneyno xallinta dhibaatada wasakheynta qashinka caagga ah Isticmaalka koobabka sharaabka ee la qaboojiyey iyo daboolka ayaa ah qorshaha xiga ee hadafka caalamiga ah ee Coca-Cola ee yareynta qashinka caagga ah. ” Mahoney ayaa yiri.
Marka loo eego aragtida “Dunida Qashinka-Bilaashka ah” ee Coca-Cola, hadafkeeda caalamiga ah waa in dib loo warshadeeyo oo laga faa’iideysto dhammaan dhalooyinka iyo gasacadaha iyo baakadaha lagu iibiyo sannadka 2030, lana hubiyo in dhammaan konteenarrada wax ku darsada aysan geli doonin qashinka ama badda. Marka la eego, dhalada Coca-Cola Amatil ayaa door muhiim ah ka ciyaaray isku dubaridka qorshaha keydinta weelka baakadka (CDS) ee guud ahaan Australia.
Coca-Cola waxay sidoo kale dejisay hadaf caalami ah oo ah in ugu yaraan 50% dib loo warshadeeyo baakadaha marka la gaaro 2030. Waqtigaan la joogo, dhalooyinka balaastiga ah ee Australia ayaa gaaray hadafkan
Ulilever: Isticmaalka balaastigyada dib loo warshadeeyay way laba jibaarmi doonaan sanadka soo socda
Unilever ayaa dhawaan soo saartay horumarkii ugu dambeeyay ee baakideeda waarta. Shirkaddu waxay sheegtay inay kordhisay isticmaalka caagagga dib loo rogay oo laga dhigay 75,000 tan, in ka badan 10% guud ahaan isticmaalka balaastigga. Unilever ujeedkeedu waa in la isticmaalo ugu yaraan 25% caag dib loo warshadeeyay sannadka 2025.
Sanadkii la soo dhaafay, Unilever waxay sheegtay in astaanta ay yareyn doonto isticmaalka in ka badan 100,000 tan oo caag ah oo bikro ah isla markaana ay si firfircoon u isticmaali doonto caag dib loo warshadeeyay sannadka 2025, iyadoo lagu gaarayo himilada kala badh isticmaalka budada caagga ah.